ပွနျကွားရေး – Page 38 – Yangon Hluttaw
Friday , April32020
ဥပဒမြေား ၊ လလေ့ာရေး ၊ စာကွညျ့တိုကျ ၊ လမျးညှန်ျ ၊ ဆကျသှယျရနျ ၊ အကူအညီ
ကျောမတီ/အဖှဲ့ / အသငျး
စာကွညျ့တိုကျ နှငျ့ EBook
စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေးနှငျ့ ရလေုပျငနျး
အမြိုးသားစီမံကိနျး၊ ပွညျထောငျစု၏ ဘဏ်ဍာငှအေရအသုံးနှငျ့ အခှနျကောကျဆိုငျရာ ကဏ်ဍ
နိုငျငံသားမြား၏ မူလအခှငျ့အရေး၊ ဒီမိုကရစေီအရေးနှငျ့ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာဖှံဖွိုးတိုးတကျရေးကဏ်ဍ
Seminar, Workshop, Training
၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ်ဍာရေးနှဈအတှကျ ဘတျဂကျြစိစဈညှိနှိုငျး အစညျးအဝေးကငျြးပ
ဒုတိယအကွိမျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေး၊ စှမျးအငျ၊ လြှပျစဈ၊ သတ်တုနှငျ့ သဈတောရေးရာကျောမတီ ပုံမှနျအစညျးအဝေး(၃/၂၀၂၀)
(၄)ခနျးတှဲ (၄)ထပျ အရာထမျးအိမျရာ တညျဆောကျရေးစီမံကိနျးအားကှငျးဆငျးကွညျ့ရှု
Coronavirus Disease (COVID-19) ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးဆိုငျရာ ရနျပုံငှေ၊ ဆေးနှငျ့ ဆေးပစ်စညျးမြား လှူဒါနျးပေးအပျပှဲ အခမျးအနားကငျြးပ
တရားစီရငျရေး၊ ဥပဒစေိုးမိုးရေးနှငျ့ တိုငျကွားစာမြား၊ အသနားခံစာမြား၊ စိစဈရေးကျောမတီ သညျ CMP ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကှငျးဆငျးလလေ့ာ
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး တိုကျခနျးအိမျရာပိုငျဆိုငျမှု ဥပဒမေူကွမျးနှငျ့စပျလဉျြး၍ သကျဆိုငျရာ တာဝနျရှိပုဂ်ဂိုလျမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး
Home / ပွနျကွားရေး (page 38)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၆)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် အဆောက်အဦ(၂)လုံးအတွက် မြို့ပြ လုပ်ငန်းအား ကွန်ကရစ်အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်ချုပ်ဆို
April 26, 2019	ပွနျကွားရေး, သတငျး 0
ရန်ကုန်၊ ဧပြီလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ ၂၅.၄.၂၀၁၉ ရက် နံနက် (၀၉း၃၀)အချိန်တွင် ဒဂုံမြို့နယ၊် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ ပတ္တမြားခန်းမ၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ရေးတွင် တင်ဒါ အောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၆)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် အဆောက်အဦ(၂)လုံးအတွက် လျှပ်စစ်၊ရေသန့်၊ မြို့ပြအရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးနှင့် လက်ခံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာအောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများရှေ့မှောက်တွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးနှင့် လက်ခံရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံသူ အဆောက်အဦ သုတေသနဓါတ်ခွဲခန်းများရုံး အဆောက်အဦဦးစီးဌာန၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး (မြို့ပြ)တို့သည် …
Advanced Metering Infrastructure (AMI) စနစ်စမ်းသပ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအား ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အခမ်းအနားတက်ရောက်
April 24, 2019	ပွနျကွားရေး, သတငျး 94
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီလ ၂၄ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ၂၃.၄.၂၀၁၉ ရက်၊ (အင်္ဂါနေ့) နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်လျှပ်စစ် မန်နေဂျာရုံး၌ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(YESC)မှ Pilot Project အနေဖြင့် ဒေါပုံမြို့နယ်နှင့် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်များတွင် Advanced Metering Infrastructure (MAI) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့် အခြေအနေများအား ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ သိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရန်ကုန်လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း(YESC)မှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ (unicode) …
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ပုံငွေတောင်းခံမှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်
April 24, 2019	ပွနျကွားရေး, သတငျး 0
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီလ ၂၃ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ပုံငွေတောင်းခံမှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ၂၃.၄.၂၀၁၉ ရက် (အင်္ဂါနေ့) နေ့လယ် (၁၃းဝဝ) နာရီမှ (၁၆းဝဝ) နာရီအထိ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီရုံးခန်း တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင့်လွင်၊ ကေ်ာမတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဝင်း၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သက်ထားနွယ်ဝင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ပုံငွေတင်ပြ တောင်းခံထားသည့် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ သတ္တူတွင်း ဦးစီးဌာန(ဆားလုပ်ငန်း)၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ မြန်မာရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)နှင့် တိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် …
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၏ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးနှင့် လက်ခံရေးကော်မတီမှ လှည့်လည်ကြည့်ရှု
April 23, 2019	ပွနျကွားရေး, သတငျး 0
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီလ ၂၃ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ၂၃.၄.၂၀၁၉ ရက် နံနက်(၀၈း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဒဂုံမြို့နယ် လွှတ်တော်ဝန်းရှိ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး (၆)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၂လုံးတည်ဆောက်နေမှုအခြေအနေများအား အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးနှင့် လက်ခံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာအောင်၊ အတွင်းရေးမှူး(၁)ဦးသက်ထွန်းဝင်း နှင့် အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မှူး (ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး)တို့မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွင်သို့ လှည့်လှည်ကြည့်ရှုခဲ့ပါ သည်။ (unicode) ရနျကုနျ ၊ ဧပွီလ ၂၃ ရကျ ၊ ၂၀၁၉ ၂၃.၄.၂၀၁၉ ရကျ နံနကျ(၀၈း၀၀) နာရီအခြိနျတှငျ ဒဂုံမွို့နယျ …
Grade -6 (သင်ရိုးသစ်)တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပ
April 22, 2019	ပွနျကွားရေး, သတငျး 0
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီလ ၂၁ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ၂၁.၄.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ် ပညာရေးတက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေးအထက်တန်းကျောင်း(TTC)၌လည်းကောင်း၊နံနက်(၁၀း၀၀)နာရီအချိန်တွင် အလုံမြို့နယ် အ.ထ.က(၄)၌လည်းကောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနနှင့် ADB-EYE Project တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သော Grade -6 (သင်ရိုးသစ်)တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးလင်းနိုင်မြင့်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆရာ/ဆရာမများနှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ …
လှိုင်မြို့နယ် (66/11-6.6)kV,30MVA GIS ဓါတ်အားခွဲရုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီလ ၂၀ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ၂၀.၄.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၀၇း၃၀) နာရီအချိန်တွင် လှိုင်မြို့နယ်၊ ယောဂီကျောင်းလမ်း နှင့် ပြည်လမ်းထောင့်၌ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်မြို့နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးမြှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် လှိုင်တက္ကသိုလ်ဝန်းရှိ (66/11-6.6)kV,30MVA GIS ဓါတ်အားခွဲရုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးလှအေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် …
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr Scot Marciel ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ၁၉.၄.၂၀၁၉ ရက် မွန်းလွဲ(၁း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကျောက်စိမ်းခန်းမ၌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr Scot Marciel ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးလင်းနိုင်မြင့်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် လွှတ်တော်ရုံးအကြီးအမှူးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ (Unicode) ရနျကုနျ ၊ ဧပွီလ ၁၉ ရကျ ၊ ၂၀၁၉ ၁၉.၄.၂၀၁၉ ရကျ မှနျးလှဲ(၁း၀၀) နာရီအခြိနျတှငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော ကြောကျစိမျးခနျးမ၌ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာအမရေိကနျသံအမတျကွီး H.E. Mr …
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ၁၉.၄.၂၀၁၉ ရက် နံနက်(၀၈း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဒဂုံမြို့နယ် လွှတ်တော်ဝန်းရှိ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး (၆)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၂လုံးတည်ဆောက်နေမှုအခြေအနေများအား အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးနှင့် လက်ခံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာအောင်နှင့် အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မှူး (ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး)တို့မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်သို့ လှည့်လှည်ကြည့်ရှုခဲ့ပါ သည်။ (Unicode) ရနျကုနျ ၊ ဧပွီလ ၁၉ ရကျ ၊ ၂၀၁၉ ၁၉.၄.၂၀၁၉ ရကျ နံနကျ(၀၈း၀၀) နာရီအခြိနျတှငျ ဒဂုံမွို့နယျ လှတျတျောဝနျးရှိ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီးလှတျတျောရုံး (၆)ခနျးတှဲ (၄)ထပျ ဝနျထမျးအိမျရာ ၂လုံးတညျဆောကျနမှေုအခွအေနမြေားအား …
လေးကျွန်းဓမ္မစကြာရှင်စေတီတော်မြတ်ကြီး ရွှေထီးတော်စိန်ဖူးတော်တင်လှူပွဲနှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင် ရေစက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပ
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ၁၉.၄.၂၀၁၉ ရက် နံနက်(၀၇း၀၀) နာရီအချိန်တွင် မှော်ဘီမြို့နယ် နှောကုန်းကျေးရွာရှိ သဲအင်းဂူ ဗဟိုဌာနချုပ်ရိပ်သာ၌ တည်ထားကိုးကွယ်သည့် လေးကျွန်းဓမ္မစကြာရှင်စေတီတော်မြတ်ကြီး ရွှေထီးတော် စိန်ဖူးတော်တင်လှူပွဲနှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင် ရေစက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးလှအေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးလင်းနိုင်မြင့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက် ကြည်ညိုပူဇော်ခဲ့ပါသည်။ (Unicode) ရနျကုနျ ၊ ဧပွီလ ၁၉ ရကျ ၊ ၂၀၁၉ ၁၉.၄.၂၀၁၉ …
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထအကြိမ် အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တော်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီလ ၁၇ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ၁၇.၄.၂၀၁၉ ရက် နေ့လည်(၁၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၌ စတုတ္ထအကြိမ် အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တော်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ဒဂုံမြို့နယ် ကျားကူးကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသအမှူးပြုသော ဆရာတော်သံဃာတော်များမှ အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးလင်းနိုင်မြင့်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးအကြီးအမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တော်နာယူကြည်ညိုခဲ့ပါသည်။ (Unicode) ရနျကုနျ ၊ ဧပွီလ ၁၇ ရကျ ၊ ၂၀၁၉ ၁၇.၄.၂၀၁၉ ရကျ နလေ့ညျ(၁၃း၀၀) နာရီအခြိနျတှငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောရုံး၌ စတုတ်ထအကွိမျ အန်တရာယျကငျးပရိတျတျောရှတျဖတျပူဇျောပှဲ အခမျးအနားကငျြးပခဲ့ပါသညျ။ …
Page 38 of 61« First...102030«3637383940	»	5060...Last »
ကျောမတီအဖှဲ့ဝငျမြား အစားထိုး လဲလှယျဖှဲ့စညျးခွငျး
ကျောမတီ အဖှဲ့ဝငျမြား ထပျမံထညျ့သှငျးဖှဲ့စညျးခွငျး၊ ပွောငျးရှခွေ့ငျးနှငျ့ ပယျဖကျြခွငျး
ပွညျသူ့လှတျတျော Website အသဈ ထုတျလှငျ့ထားရှိမှုအား အသိပေးတငျပွခွငျး
လှိုငျမွို့နယျ၊ (၁၂)ရပျကှကျတှငျ နှဈစဉျရကွေီးရလြှေံဖွဈပှားမှုကို ထိနျးသိမျးနိုငျရနျအတှကျ သမိုငျးခြောငျးတှငျ မွထေိနျးနံရံ ဆောငျရှကျရနျ လိုအပျပါသောကွောငျ့ အောငျဓမ်မရိပျသာ အနောကျကြောဘကျတှငျ ကနျြရှိနသေော မွထေိနျးနံရံအပိုငျးအား ယခုလာမညျ့ ဘဏ်ဍာနှဈအတှငျး ဆောငျရှကျပေးရနျ အစီအစဉျရှိ/မရှိ မေးမွနျး
ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၏ အမြိုးသားပညာရေး မဟာဗြူဟာစီမံကိနျးနှငျ့ ပညာသငျယူမှု အခှငျ့အလမျးတိုးမွှငျ့ရေး၊ ပညာရေးအရညျအသှေး မွငျ့မားရေးဆိုငျရာ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျနမှေုမြားအား ဆှေးနှေးတငျပွခွငျး
ဒုတိယအကွိမျ ပွညျသူ့လှတျတျော ပ ဉ်စမပုံမှနျ အစညျးအဝေး ပထမနတှေ့ငျ ပွညျသူ့လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ ပွောကွားသညျ့ ကွိုဆိုနှုတျခှနျးဆကျအမှာစကား
ပွညျသူ့လှတျတျော၊ လြှပျစဈနှငျ့စှမျးအငျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကွညျမိုးနိုငျ The World Bank Group မှ Mr. Sunil Kumar Khosla ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နေောကျခံသမိုငျး ၁။ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောရုံးသညျ ဒဂုံမွို့နယျ၊ ပွညျလမျးနှငျ့အလုံလမျးရှိ ယခငျပွညျသူ့ လှတျတျောအဆောကျအဦတှငျ တညျရှိပါသညျ။ လှတျတျောအဆောကျအဦတညျရှိရာ မွအေကယျြအဝနျးမှာ ၅၄.၁၆၈ ဧကရှိပွီး အဆောကျအဦအကယျြအဝနျးမှာ အလြား ၈ဝဝ ပေ၊ အနံ ၆၅ဝ ပေ ရှိပါသညျ။
The Sahifa responsive WordPress theme combines practical elegance with powerful features. Retina ready and designed specifically for use acrossabroad array of devices and platforms.
Powered by MyanmarGateway
© Copyright 2020, Myanmar Parliament